मानविकी र व्यवस्थापनः शक्तिमा पुर्‍याउने शिक्षा
रिपोर्टबिहिवार, भाद्र २९, २०७४
स्नातक तहमा मानविकी र व्यवस्थापन संकायको अध्ययनले सामान्य जागिर मात्र होइन जुनसुकै क्षेत्रमा नेतृत्वदायी र शक्तिशाली पदमा पुग्ने अवसरको ढोका खोल्छ ।
ललितपुर बालकुमारीस्थित काठमाडौं मोडल कलेज।
उच्च शिक्षा अध्ययनकै क्रममा वा लगत्तै जागिर खाने चाहना सबैको हुन्छ । तर, चाहना राखेर मात्र हुन्न । उपयुक्त संकायको छनोट गर्नुपर्छ । त्यसो त पढाइलगत्तै काम पाउन विज्ञान र प्राविधिक विषयहरू नै छान्नुपर्ने कतिपयको मान्यता रहँदै आएको छ । तर, यो पूर्ण सत्य होइन । मानविकी र व्यवस्थापन संकायका विद्यार्थीले पढाइसँगै वा सिध्याउनेबित्तिकै जागिरमा अब्बलता देखाइसकेका/देखाइरहेकै छन् ।
देशको भूगोल र आवश्यकता अनुकूलको पाठ्यक्रमकै कारण पछिल्लो समय प्रशासन, लेखा, ब्यांकिङ, व्यापारिक, व्यावसायिक तथा पत्रकारिताजस्ता क्षेत्रहरूमा मानविकी वा व्यवस्थापन पढेका जनशक्तिको माग बढ्दो छ । तुलनात्मक रूपमा अन्य संकायभन्दा कम लगानी, मिहिनेतमा बढी प्रतिफल पाउने भएकै कारण विद्यार्थीको रुचिमा पनि कमी आएको छैन । नेपाल मेगा कलेजका कार्यक्रम निर्देशक मधुकर पाण्डे बजारमा माग भएकैले मानविकी र व्यवस्थापन विद्यार्थी र अभिभावकको रोजाइमा परेको बताउँछन् ।
यतिबेला मुलुकमा कर्पोरेट हाउस, ब्यांकिङ, जलविद्युत्, शिक्षालगायतका हरेक क्षेत्र थप फराकिलो बन्दै गइरहेका छन् । यी सबै क्षेत्रको व्यवस्थापन सम्हाल्ने, आर्थिक र कानूनी पाटो हेर्ने, प्रशासन चलाउने व्यवस्थापन वा मानविकी पढेकाहरूले नै हो । “संस्थाको प्रशासन र व्यवस्थापन हाँक्ने जनशक्ति उत्पादन गर्ने संकाय भनेकै मानविकी र व्यवस्थापन हुन्”, एशियन कलेज फर एड्भान्स स्टडिजका प्रशासन प्रमुख प्रणय घिमिरे भन्छन् ।
उपल्लो दर्जाका जनशक्ति उत्पादन गर्ने विषय भएकै कारण मानविकी र व्यवस्थापनलाई ‘शक्तिमा पुर्‍याउने शिक्षा’ का रूपमा हेरिन्छ । कारण, निजी मात्र होइन, राजनीतिक बागडोर सम्हाल्ने, न्यायालय हाँक्ने, प्रशासनिक संयन्त्र, कूटनीति र सुरक्षा निकायको नेतृत्व गर्ने अधिकांशले यी दुई विषय अध्ययन गरेका हुन्छन् । साउथ एशियन इन्ष्टिच्यूट अफ म्यानेजमेन्ट (साइम) कलेजका डीन प्रा. विजय केसीको तर्कलाई मान्ने हो भने देश चलाउने अधिकांश क्षेत्र वा विभागको नेतृत्वमा मानविकी र व्यवस्थापन पढेकाहरूकै बोलवाला छ ।
काठमाडौं थापाथलीस्थित एभरेष्ट कलेज ।
पहिले पढाइ, अनि जागिर– अन्य विषयको हकमा यो भनाइ सही हुन सक्छ तर मानविकी र व्यवस्थापन संकायमा भने पढाइ र काम सँगै अघि बढाउन सकिन्छ । ग्लोबल एकेडेमी अफ टुरिजम एण्ड हस्पिटालिटी एजुकेशन (गेट) कलेजका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) खेम लकाई पढ्दापढ्दै पनि कर्पोरेट हाउस, ब्यांकिङ, पर्यटनलगायत विभिन्न क्षेत्रमा आवद्ध हुन सकिने बताउँछन् । “देशमा विस्तार भइरहेको लगानीसँगै हरेक क्षेत्रमा मानविकी र व्यवस्थापन पढेका जनशक्ति नै चाहिन्छ”, उनी भन्छन् ।
व्यवस्थापन तथा मानविकीको क्षेत्र पनि फराकिलो छ । “मानविकी र व्यवस्थापनामा परिवेश अनुकूलका विषय पढाइने भएकाले हरेक क्षेत्रमा विद्यार्थी अब्बल हुन सक्छन्”, साइम कलेजका केसी भन्छन्, “एउटै विषय पढेर पनि फरक क्षेत्रमा आफ्नो क्षमता देखाउन सकिन्छ ।” प्रेसिडेन्टल कलेजका कार्यकारी निर्देशक लक्ष्मण केसी पनि मानविकी र व्यवस्थापन पढेका जनशक्ति राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थादेखि राजनीतिसम्म उपयुक्त हुने तर्क गर्छन् ।
समाजबारे फराकिलो र गम्भीर चिन्तन गर्न सक्ने संकाय हो, मानविकी । नेपाल मेगा कलेजका पाण्डे समाजसँग घुलमिल हुने विषय मानविकी मात्रै भएको दाबी गर्छन् । “मानविकीलाई जताततै अवसर नै अवसर छ”, उनी भन्छन् ।
रत्न राज्यलक्ष्मी क्याम्पस (आरआर) बाट पत्रकारितामा स्नातकोत्तर सिध्याएलगत्तै सोलुखुम्बुका मदन राई संयुक्त राष्ट्रसंघ अन्तर्गतको युवा तथा विद्यार्थी विकास कार्यक्रममा आबद्ध भए । “मानविकीमा अन्य संकाय जस्तो निश्चित सीमा वा सीमितता छैन”, राई भन्छन् ।
सरकारी जागिरका लागि मात्र मानविकी संकायको महत्व छ भन्ने परम्परागत मान्यता व्यावहारिक रूपमै तोडिएको छ । मानविकीबाट उच्च शिक्षा हासिल गर्नेहरू निजीसँगै गैरसरकारी संस्था, कूटनीतिक नियोग नै हाँकिरहेका छन् । यताका केही वर्षहरूमा मानविकी पढेर विकसित मुलुकहरूमा छात्रवृत्तिमा स्नातकोत्तर र विद्यावारिधि गर्न जाने अवसर बढ्नुले पनि मानविकीको शक्ति प्रमाणित गरेको निम्स कलेजका संयोजक भीम सिग्देलको बुझाइ छ ।
सिग्देल मिलेर काम गर्ने सूत्र र लचिलोपना सिक्न पनि मानविकी आवश्यक रहेको बताउँछन् । काठमाडौं मोडल कलेजका प्राचार्य सुरेन्द्र सुवेदी पछिल्ला वर्षहरूमा मानविकी संकायमा विविधता बढेकाले पनि नेपाललगायत विदेशमा यो संकायका जनशक्तिले सहजै रोजगारी पाएको विश्लेषण गर्छन् ।
मानविकी संकायअन्तर्गत स्नातक तहमा पत्रकारिता, ग्रामीण विकास, समाजशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, अर्थशास्त्र, पर्यटन, फेसन डिजाइन, गूड गभर्नेन्स, सामाजिक उद्यमशीलता, सोसल वर्क, मनोविज्ञानलगायतका विषय अध्ययन गर्न सकिन्छ । मानविकीको अर्को विशेषता भनेको कक्षा १२ मा जुन संकाय वा विषय पढेको भए पनि स्नातकमा रोजेको विषय पढ्न पाइन्छ ।
सरस्वती मल्टिपल क्याम्पस, काठमाडौंबाट २०६८ सालमा बीबीएस उत्तीर्ण गरेलगत्तै मीनराज अधिकारीले साबिक सानिमा विकास ब्यांकमा एसिस्टेन्टको काम थाले । ब्यांकको काम र स्नातकोत्तर तहको पढाइलाई निरन्तरता दिएका उनी हाल सानिमा ब्यांकको जुनियर अफिसरको रूपमा नयाँबानेश्वर शाखामा कार्यरत छन् ।
ब्यांकिङ क्षेत्रमा करिअर बनाउने सोचले विना नेपाली ललितपुरस्थित निम्स कलेजको चारवर्षे बीबीएस तहमा भर्ना भइन् । तर, ब्यांकिङ क्षेत्रमा प्रवेश पाउन उनले चार वर्ष कुर्नै परेन । “पढ्दापढ्दै कृषि विकास ब्यांकमा चौथो तहमा नाम निकाल्न सफल भएँ” उनी भन्छिन्, “जुन उद्देश्य राखेर विषय छनोट गरेकी थिएँ, त्यो पूरा भयो ।” स्नातकोत्तर तहको तयारीमा रहेकी उनी अहिले कृषि विकास ब्यांकको मकवानपुर, पालुङ उपशाखामा खटिएकी छिन् ।
बीबीएस र बीबीएको आकर्षण बढ्नुमा पढाइ सँगसँगै रोजगारी रहेको कलेज सञ्चालकहरू बताउँछन् । “चारवर्षे कोर्स भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता त छँदैछ । कर्पोरेट र ब्यांकिङ क्षेत्रमा पनि सजिलै काम पाउन सक्छन्” प्रेसिडेन्टल कलेजका केसी भन्छन्, “विद्यार्थीलाई अन्तर्राष्ट्रिय एक्सपोजरको लाभ पनि छ ।” दुवै कोर्समा अनिवार्य रहेको इन्टर्नसिपले विद्यार्थीलाई व्यावहारिक बनाउन र भविष्यमा काम गर्न सहज हुने फिनिक्स कलेज अफ म्यानेजमेन्टका प्राचार्य डा. विनोद खत्री बताउँछन् । “बीबीएस वा बीबीए पढेकालाई करिअरमा धेरै ‘अप्सन’ छन्” खत्री भन्छन्, “आफैं उद्यमी बन्न चाहनेका लागि पनि बाटो फराकिलो छ ।”
हाल त्रिभुवन विश्वविद्यालय, पोखरा विश्वविद्यालय, काठमाडौं विश्वविद्यालय र पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयले बीबीए कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छन् । केही कलेजले विदेशी विश्वविद्यालयको सम्बन्धनमा पनि बीबीए कार्यक्रम चलाइरहेका छन् । चार वर्षमा आठ सेमेस्टर पढाइ हुने बीबीएमा इन्टर्नसिपबाहेक सैद्धान्तिक ज्ञानसँगै व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित विषयमा सामूहिक छलफल गराइन्छ । विशेषगरी ब्यांकिङ, इन्स्योरेन्स, कर्पोरेट हाउस, बहुराष्ट्रिय कम्पनीमा बलियो उपस्थिति जनाएको कलेज सञ्चालकहरूको भनाइ छ ।
साइम कलेजका डीन केसी बीबीए वा बीबीएस अध्ययन गरेका विद्यार्थी विदेशमा समेत अब्बल भएको दाबी गर्छन् । उनी भन्छन्, “विदेशी विश्वविद्यालयमा छात्रवृत्ति मात्र पाएका छैनन्; राम्रो कम्पनीमा काम समेत गरिरहेका छन् ।”
हस्पिटालिटीः विदेशमा समेत अवसर
स्वदेश तथा विदेशमा राम्रो अवसर दिलाउने विषयहरू जो–कोहीको रोजाइमा पर्नु स्वाभाविक हो । पछिल्लो समयमा यस्तै एउटा विषयको आकर्षण बढेको छ– हस्पिटालिटी । व्यवस्थापनअन्तर्गतको यो विषय रोजगारमुखी भएकै कारण थुप्रै कलेजले हस्पिटालिटीलाई प्राथमिकतामा राख्न थालेका छन् । यो विषय विशेषगरी होटल, ट्राभल एजेन्सी, एअरलाइन्स, पर्यटन, कर्पोरेट हाउसलगायतका क्षेत्रमा सेवा व्यवस्थापनका लागि आवश्यक जनशक्ति उत्पादन गर्न उपयुक्त मानिन्छ ।
काठमाडौ ज्ञानेश्वरस्थित आईएसटी कलेज ।
आईएसटी कलेजकी प्राचार्य सम्झना बस्न्यात तारे होटलदेखि संस्थाको प्रशासनिक व्यवस्थापन र आफैं उद्यमी बन्न सक्ने अवसरकै कारण हस्पिटालिटीमा विद्यार्थी तानिएको बताउँछिन् । “हस्पिटालिटी पढेपछि कोही पनि बेरोजगार बस्नु पर्दैन” उनी भन्छिन्, “पढ्दै काम गर्ने विद्यार्थीको संख्या पनि उल्लेख्य छ ।”
स्वदेशमा मात्र होइन, हस्पिटालिटी पढेकाको माग विश्वबजारमै छ । यहीं पढ्नेहरूले पनि विभिन्न मुलुकमा इन्टर्नसिपको मौका पाउँछन् । जसले गर्दा दुई देशबीच सांस्कृतिक आदानप्रदानका साथै काम गर्न पनि सजिलो हुने एनसीसीएस कलेजका निर्देशक प्रज्वल बानियाँ क्षेत्री बताउँछन् । विदेशमा उपल्लो तहको पढाइ र रोजगारको योजना बनाइरहेकाहरूका लागि पनि हस्पिटालिटी सुहाउँदो विषय रहेको क्षेत्रीको बुझाइ छ ।
पर्यटन व्यवसायको विकाससँगै होटल, ट्राभल एजेन्सी, एअरलाइन्स पनि थपिएका छन् । तर, दक्ष जनशक्ति भने कमी नै छ । सम्बन्धित विषय अध्ययन नगरेका जनशक्तिले धानिरहेको अहिलेको अवस्थामा सक्षम र पढेलेखेका जनशक्तिको खोजी हुन थालेको छ । आईएसटी कलेजकी बस्न्यात त्यही भएर पनि यो विषयको महत्व बढेको तर्क गर्छिन् । “होटल तथा पर्यटनमा मात्र होइन, जुनसुकै क्षेत्रमा पनि हस्पिटालिटी जनशक्तिको खाँचो छ”, उनी भन्छिन् ।
कुन कलेज ? कस्ता विशेषता ?
एभरेष्ट कलेज, थापाथली
विशुद्ध व्यवस्थापन संकाय अध्यापन गराउने कलेज हो, एभरेष्ट कलेज । यो कलेजले १९ वर्षदेखि बीबीए र बीबीएस पढाउँदै आइरहेको छ । बीबीएमा विशिष्ट स्थानसहित शतप्रतिशत नतिजा ल्याएको यो कलेजले विद्यार्थीलाई व्यावसायिक जीवनमा आवश्यक पर्ने तालीम, करिअर गाइडलाइन तथा व्यावहारिक शिक्षा पनि दिंदै आएको छ । सक्षम शिक्षक, सुविधासम्पन्न संरचना, उपयुक्त वातावरण कलेजको विशेषता हो ।
नेपाल मेगा कलेज, बबरमहल
नेपाल मेगा कलेजमा बीबीएस र बीए पढाइ हुँदै आएको छ । पढाइ, प्रयोगात्मक अभ्यासका अतिरिक्त कलेजले करिअर योजना प्लानका कक्षा पनि गर्दै आइरहेको छ । मेगा कलेजले अमेरिकाको युनिभर्सिटी अफ सेन्ट्रल मिसौरीसँग हातेमालो गरेको छ । यसले वर्षमा केही दिन मिसौरी कलेजका विद्यार्थीलाई मेगामा र मेगाका विद्यार्थी मिसौरी पुग्ने अवसर मिलाएको छ । बीबीएसका विद्यार्थीलाई चार वर्षको अवधिमा १२ महीना त इन्टर्नसिप नै गराउने कलेजको दाबी छ ।
आईएसटी कलेज, ज्ञानेश्वर
अष्ट्रियाको सल्जवर्ग युनिभर्सिटी अफ अप्लाइड साइन्स सम्बन्धनमा सञ्चालित आईएसटी कलेजले स्नातक तहमा हस्पिटालिटी विषय पढाइरहेको छ । पढाइ मात्रै नभई विद्यार्थीको समग्र विकासलाई ध्यान दिएको कलेजको दाबी छ । आईएसटीले चीन, दुबई, मलेशिया, भारतलगायत देशमा विद्यार्थीलाई इन्टर्नसिप गराइरहेको छ । अध्यापनका साथै क्रेडिट ट्रान्सफर र स्वदेशका साथै विदेशमा ‘जब प्लेसमेन्ट’ कार्यमा पनि कलेजको सहभागिता छ ।
काठमाडौं मोडल कलेज, बालकुमारी
काठमाडौं मोडल कलेज (केएमसी) ले बीबीए, बीबीएस र बीए सञ्चालन गरिरहेको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सम्बन्धनबाट सञ्चालित केएमसीले बीबीएअन्तर्गत त्रिविका साथै अतिरिक्त पाठ्यक्रमसमेत पढाउने गरेको छ, जसअन्तर्गत प्रत्येक सेमेस्टरमा दुईवटा छुट्टै कोर्सको व्यवस्था गरेको छ । केएमसीले बीबीएमा निरन्तर गोल्ड मेडल प्राप्त गरिरहेको छ । त्रिविसँगको सहकार्यमा बीए÷बीएसडब्लूअन्तर्गत शैक्षिक विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको यो कलेजले विदेशमा रहेका नेपाली प्राध्यापकहरूबाट विशेष कक्षा पनि सञ्चालन गर्ने गर्छ । प्रयोगात्मक अभ्यास, अतिरिक्त क्रियाकलाप, व्यक्तित्व विकास, इन्टर्नसिप, अनुभवी शिक्षक, सुविधासम्पन्न भौतिक संरचना आफ्नो विशेषता भएको केएमसीको दाबी छ ।
साइम कलेज, पुरानो बानेश्वर
पोखरा विश्वविद्यालयको सम्बन्धन पाएको साउथ एशियन इन्ष्टिच्यूट अफ म्यानेजमेन्ट (साइम) कलेजले बीबीए अध्यापन गराउँदै आएको छ । दक्ष शिक्षक, सञ्चालक, प्रोजेक्ट वर्कमा आधारित अध्यापन व्यावहारिक भएको कलेजको दाबी छ । कलेजले ब्यांकिङ, ट्रेडिङ हाउस, एअरलाइन्सलगायतमा इन्टर्नसिप गराउँदै आएको छ । विद्यार्थीकेन्द्रित पढाइ, गतिलो पुस्तकालय, सुविधासम्पन्न भौतिक पूर्वाधार रहेको कलेजको भनाइ छ ।
गेट कलेज, मण्डिखाटार
ग्लोबल एकेडेमी अफ टुरिजम एण्ड हस्पिटालिटी एजुकेशन (गेट) कलेजले व्यवस्थापनअन्तर्गत हस्पिटालिटी पढाइरहेको छ । कलेजले प्रयोगात्मक अभ्यासलाई प्राथमिकता दिएको छ । कलेजमा नेपालीका साथै डेनमार्क, चीन, बाङ्लादेश, अफगानिस्तानका विद्यार्थी समेत पढिरहेका छन् । विश्वस्तरको पढाइ र गुणस्तरका कारण नै विदेशी विद्यार्थी आकर्षित गर्न सकेको कलेजको दाबी छ । गेटले थाइल्याण्ड, दुबई, बहराइन, स्पेन, चीनलगायतका देशमा विद्यार्थीलाई इन्टर्नसिप गराउँदै आएको छ । विद्यार्थीलाई स्वदेश तथा विदेशमा ‘जब प्लेसमेन्ट’ मा पनि कलेजले काम गरिरहेको छ ।
एनसीसीएस कलेज, पकनाजोल
नेशनल कलेज अफ कम्प्युटर स्टडिज (एनसीसीएस) कलेजले बीआईएम, बीएचएम र बीएससी सीएसआईटी पढाइरहेको छ । दक्ष व्यवस्थापन, योग्य शिक्षक, व्यावहारिक र प्रयोगात्मक अध्यापन, अनुशासित वातावरणमा आफ्नो विशेषता भएको कलेजको दाबी छ । कलेजले थाइल्याण्ड, मलेशिया, चीनलगायतका देशमा इन्टर्नसिप गराउँदै आएको छ ।
यूनिग्लोब कलेज, नयाँबानेश्वर
यूनिग्लोब कलेजले बीबीए र बीबीए–बीआई अध्यापन गराउँदै आएको छ । पोखरा विश्वविद्यालयको सम्बन्धन रहेको यूनिग्लोबले व्यावहारिक सिकाइ पद्धति, जब प्लेसमेन्ट तथा करिअर योजनामा विशेष ध्यान दिने गरेको कलेजको भनाइ छ । विद्यार्थीको आन्तरिक मूल्यांकन, अनुशासनमा महत्व दिएको कलेजसँग राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षणको अनुभव भएका शिक्षकको टीम तथा दक्ष सञ्चालक भएको दाबी छ ।
फिनिक्स कलेज, थापागाउँ
मलेशियाको लिंकन यूनिभर्सिटी कलेजबाट सम्बन्धन पाएको फिनिक्स कलेजले बीबीए अध्यापन गराउँदै आएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त विदेशी डिग्री स्वदेशमै पढाउँदै आएको कलेजले प्रयोगात्मक अभ्यासलाई विशेष जोड दिएको छ । पढाइसँगै विद्यार्थीको व्यक्तित्व विकास, नेतृत्वमा पनि उत्तिकै ध्यान दिने कलेजले जनाएको छ ।
लर्ड बुद्ध एजुकेशन फाउण्डेशन (एलबीईएफ) ले मलेशियाको एशिया प्यासिफिक यूनिभर्सिटीबाट सम्बन्धन पाएको छ । कलेजले बीएस्सी आईटी र बीबीएम कोर्स सञ्चालन गरिरहेको छ । जुनसुकै विषय वा संकायबाट प्लस टू पास गरेकाले पढ्न पाउने बीएस्सी आईटी वा बीबीएम अध्यापनमा कलेजले प्रोजेक्ट वर्क, अवलोकन तथा इन्टर्नसिपमा विशेष ध्यान दिएको सञ्चालकको दाबी छ । समयानुकूल परिमार्जित पाठ्यक्रमका कारण विद्यार्थीको व्यावसायिक सीप विकासमा सहयोग हुने कलेजले जनाएको छ ।
हेराल्ड कलेज, विशालनगर
बेलायतको उल्भर ह्याम्प्टन विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त हेराल्ड कलेजले बीबीए र बीआईटी अध्यापन गराउँदै आएको छ । कलेजले प्रयोगात्मक माध्यमबाट अध्यापन गराइरहेको छ । यसका साथै समय–समयमा विद्यार्थीलाई ओलिभर ह्यामिल्टन विश्वविद्यालयको अवलोकन भ्रमण पनि गराइरहेको जनाएको छ । विद्यार्थीलाई विभिन्न कर्पोरेट हाउसमा इन्टर्नसिप गराइरहेको कलेजले प्रशासनिक ज्ञान तथा नेतृत्व विकासको तालीम पनि दिंदै आएको छ ।
इश्लिङ्टन कलेज, कमलपोखरी
इश्लिङ्टन कलेजले बीबीए र बीआईटी अध्यापन गराइरहेको छ । विद्यार्थीहरूलाई देश, विदेशमा रोजगारीको अवसर दिंदै आएको कलेजले लण्डन मेट्रोपोलिटन विश्वविद्यालयसँग पनि सहकार्य गरिरहेको छ । थाइल्याण्ड, बेलायतलगायतका मुलुकमा विद्यार्थीलाई वर्कसप गराइरहेको कलेजले विदेशका औद्योगिक क्षेत्रको भ्रमण, विश्वविद्यालयमा तालीम, कार्यशाला सञ्चालन गर्दै आएको छ । कलेजसँग विश्वस्तरको भौतिक सुविधा र अनुभवी शिक्षक भएको सञ्चालकको दाबी छ ।
किङ्ग्स कलेज, बबरमहल
बीबीए कोर्स सञ्चालन गरिरहेको किङ्ग्स कलेजले विश्वस्तरको पढाइ स्वदेशमै उपलब्ध गराइरहेको दाबी गरेको छ । शैक्षिक गतिविधिका साथै अतिरिक्त क्रियाकलापलाई उत्तिकै महत्व दिंदै आएको कलेजले उत्कृष्ट विद्यार्थीका लागि छात्रवृत्तिको व्यवस्था पनि गरेको छ । साथै जागिर खोज्न र विद्यार्थीको व्यक्तित्व विकासमा जोड दिने गरेको कलेजको भनाइ छ । अनुभवी र योग्य टीमद्वारा सञ्चालित कलेजले विदेशी प्राध्यापकको अतिथि कक्षा पनि सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ । किङ्ग्स अमेरिकाको वेष्टक्लिफ विश्वविद्यालयको सम्बन्धनबाट सञ्चालित छ ।
प्रेसिडेन्टल कलेज, थापागाउँ
अमेरिकाको वेष्टक्लिफ विश्वविद्यालयबाटै सम्बन्धन पाएको प्रेसिडेन्टल बिजनेस स्कूलले बीबीए अध्यापन गराइरहेको छ । गुणस्तरीय शिक्षा नै पहिलो प्राथमिकता भएको बताउने यो कलेजले समूह छलफल, टर्म पेपर, गेष्ट लेक्चरर, अडियो–भिडियोलगायतका माध्यममार्फत पढाइरहेको छ । रिपोर्ट राइटिङ, टिचिङ लर्निङ विधिमार्फत पढाइ, अवलोकन भ्रमण तथा कर्पोरेट क्षेत्रमा इन्टर्नसिप नियमित गराउँदै आएको कलेजको भनाइ छ ।
निम्स कलेज, लगनखेल
बीए र बीबीएस कोर्स सञ्चालन गरिरहेको निम्स कलेजले पढाइका साथै इन्टर्नसिप, नियमित प्रोजेक्ट वर्क तथा अतिरिक्त क्रियाकलापमा पनि उत्तिकै ध्यान दिएको छ । योग्य शिक्षकको टीम र सुविधासम्पन्न भौतिक संरचना आफ्नो विशेषता भएको कलेजको दाबी छ । कलेजले पुस्तकालय, नियमित आन्तरिक मूल्यांकन र छात्रवृत्तिको व्यवस्था भएको बताएको छ ।
एशियन कलेज, सातदोबाटो
पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको सम्बन्धनमा सञ्चालित एशियन कलेज फर एड्भान्स स्टडिजले बीएसएन, बीपीएच, पीबीबीएन र बी फार्म कोर्स सञ्चालन गरिरहेको छ । त्यस्तै सीटीईभीटीको सम्बन्धनबाट सीएमएलटी र डी फार्म पनि अध्यापन गराइरहेको छ । उत्कृष्ट नतिजा निकाल्दै आएको यो कलेजले रिसर्च एण्ड डेभलपमेन्ट डिपार्टमेन्ट समेत स्थापना गरेको छ । डेमो प्रयोगशालाको माध्यमबाट प्रयोगात्मक अभ्यास गराउँदै आएको कलेजले विद्यार्थीलाई जागिर खोज्नसमेत सहयोग गरिरहेको छ ।